Magdalena Andersson oo Xilka Iska Casishay Saacado kadib markii loo doortay Raisal Wasaaraha Dalka Sweden
HomeWararka Maanta SomaliskaMagdalena Andersson oo Xilka Iska Casishay Saacado kadib markii loo doortay Raisal Wasaaraha Dalka Sweden
Ra’iisul wasaaraha la doortay ee Magdalena Andersson ayaa codsatay in laga xayuubiyo booskeeda ra’iisul wasaarenimo, saacado kadib markii la doortay. Andersson ayaa sheegtay in ay wali diyaar u tahay in ay madax ka noqoto dowlad ay xisbiga Sooshal dimuqraadiga ka qayb qaadan doonaan.
Ku dhawaaqista Andersson ayaa timid daqiiqado kadib markii xisbiga deegaanku uu ku dhawaaqay in uu ka baxayo xukuumadda, kadib markii ay hoos u dhacday miisaaniyadii dowladda ee baarlamaanka ee ka dhanka ahaa miisaaniyada mucaaradka garabka midig.
“Ma doonayo inaan hogaamiyo dowlad uu shaki dastuuri ah ka jiro sharci ahaanshaheeda,” Andersson ayaa ku tiri shir jaraa’id oo ay qabtay wax yar ka hor, iyadoo oo tixraacaya fikradaha sharci ee sheegaya in cod cusub loo qaado ra’iisul wasaaraha.
“Sida uu qabo dhaqanka dastuuriga ah, dowlad wadaag ah waa in ay is casishaa marka xisbi ka baxo,” ayay raacisay. Waana sababta aan ula kulmay guddoomiyaha baarlamaanka oo aan ka codsaday in xilka ra’iisul wasaaraha la iga qaado.
Xisbiga deegaanka ayaa ka baxay dowladda nus saac ka hor inta uusan ku dhawaaqin Andersson, sababtoo ah ma aysan dooneynin in la dhaqan geliyo miisaaniyad uu xisbiga midigta fog ee Sverigedemokraterna (SD) uu ka qeyb galay